ONN:Oduu Oromia News Network Onk 11, 2017 |
Meeshaan Waraanaa Wayyaaneen Konkolaataatti Dhoksaan Fe’ee Deemu Yeroo 3ffaaf Lixa Oromiyaatti Qabame
Wayyaaneen waraana Oromoo irratti taasistu itti fufuun obsa osoo hin kutatiin meeshaa Waraanaa irra deddeebiin uummata Gumuziif dhiyeessii taasisuuf gumaacha gootu itti fuftee jiraachuu beekame.
Haaluma kanaan yeroo 3ffaaf Lixa Oromiyaa aanaa Limmuu bakka Sogee jedhamu keesaatti meeshaa waraanaa Kilaashii dabarsaa jiranii Onkoloolessa 9 bara 2017 harkatti qabamuu gabaafame.
Meeshaan kun Poolisoota Oromiyaa aantummaa uummataa agarsiisaa jitaniif hidhataa gandaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo faana waliin ta’uun qabuu isaanii gabaafame. Sichiin karaa Lixaa gama diinaa akkaan babal’atee ka jiru yoo ta’u uummanniif Humnoonni nageenya uummataa eegan Qeerroo waliin ittisa gochaa jiran daran jabeessuu isaanii dubbatu. Kanaanis Poolisoonni qorra keessa bulanii daangaa isaanii eeggachaa jiraachuu dubbatuun deggarsi qaamota barbaachisuun foolisoota uummata isaaniif of kennan kanaaf godhamuufii akka qabu dhaammatan